4 Isi ihe ntinye aka na Smart Mobile Strategy | Martech Zone
Tuesday, August 5, 2014 Tọzdee, Machị 3, 2016 Douglas Karr
Mobile, mobile, mobile… ike gwụrụ ya? Echere m na anyị na-arụ ọrụ na usoro mkpanaka na ọkara nke ndị ahịa anyị ugbu a - site na ịmepụta ndebiri email mkpanaka, iji jikọta isiokwu na-anabata, iji wuo ngwa mkpanaka. N'ikwu eziokwu, ekwenyere m na ụlọ ọrụ achụmnta ego na-elele anya na ọnụnọ weebụ ha azụ azụ ebe ọ bụ na ọtụtụ mmekọrịta na ụdị na-amalite ugbu a site na ngwaọrụ mkpanaka - ma na email, mmekọrịta, ma ọ bụ site na weebụsaịtị ha. Ndị ahịa ahịa savvy na-erite uru n'ezie na-enye ngwa mkpanaka.
Ahịa mkpanaka bụ mpaghara ọhụrụ maka ọtụtụ azụmaahịa. Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke azụmaahịa na-eji ụdị ahịa azụmaahịa, ọtụtụ n'ime ha na-eme ya ihe na-erughị otu afọ. N'agbanyeghị ọhụụ ọhụrụ ya, ihe dịka ọkara azụmaahịa na-ekwu na ha na-eme atụmatụ ịbawanye mmefu ego azụmaahịa ha na 2014, na 48% na-ezube ịha otu. O yikwara ka ihe ka ọtụtụ na-awụlị n'ahịa azụmaahịa site na ntakịrị okwukwe - ụzọ abụọ n'ụzọ atọ na-ekwu na ha enweghị ike ịtụ ROI na ahịa mkpanaka ma ọ bụ na ha amaghị. Y’oburu n’iche ihe ulo ahia n’atụ anya na ire ahia na 2014, AWeber Ya na 60 Ahịa nke abụọ inyocha ulo oru 161 na ahia ahia ahia ha na atumatu ha maka 2014.
Naanị nzaghachi m na infographic a bụ na ha na-ajụ ajụjụ a mobile saịtị ma ọ bụ mobile ngwa. Ekwetaghị m na nke ahụ bụ ezigbo ajụjụ. Ikwesiri inwe saịtị mkpanaka. Inwe ngwa mkpanaka nwere ike ime ka ị nwekwuo njikọta ma ọ bụ nye ngwá ọrụ bara uru n'obodo gị. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ndị ahịa na-ere ndị na-ete mmanụ bụ ndị anyị mepụtara ngwa ngagharị ngagharị iji nyere ndị ahịa ha aka. Ngwa mkpanaka abụghị broshuọ, ọ bụ ngwaọrụ.
Tags: 60 sekọnd nke abụọAWebermmefu ego mkpanakansogbu ịma aka n’ahịamobile ahịa azumnnyocha nyocha gbasara ekwentịnjikarịcha ekwentịnhazi mmeghachi omumeemail na-anabata
Jan 22, 2016 na 2: 50 AM
Tupu ị gụọ isiokwu a, anaghị m etinye uche na azụmaahịa ekwentị. Mgbe m gụsịrị isiokwu a, amatara m banyere ịzụ ahịa ekwentị. Daalụ maka ịkekọrịta akụkọ na-enye nkọwa. Na-ezipụ